Ubhubhane ukhuvethe lubonakala ludamba KwaZulu-Natal - Bayede News
Ubu-Afrika obuyokhulula aboHlanga emakhamandeleni ezomnotho
UNdunankulu waKwaZulu-Natal uSihle Zikalala ngoLwesibili uthe isifundazwe sesiqophe ukwehla okungamaphesenti angama-50 kwabantu abatheleleke ngokhuvetha kusukela ngeviki lama-40 kuya kwangama-42 ngowezi-2021.
UZikalala ubekhuluma nabezindaba cishe ngentuthuko yakamuva ezungeze ukhuvethe esifundazweni.
UNdunankulu uthi lokhu kwehla kwenzeke esifundazweni sonke njengoba izifunda iLembe, uThukela, neZululand ehle kakhulu ngamaphesenti angama-60.
“Izinombolo zesifundazwe zabantu ababulewe ukhuvethe, abalaliswe ezibhedlela ziphansi uma kuqhathaniswa. Isifundazwe sethu siqhubeke nokubona ukwehla okuphawulekayo kwesibalo samacala amasha emasontweni ambalwa edlule. Empeleni, esontweni eledlule, amaphesenti esewonke ashintshile enanini lamacala amasha phakathi kwesonto lama-40 nelama-42 lalingama-50%, okusho ukuthi kwehle ngama-50%. ”
“Isibalo sabangeniswa ezibhedlela nsuku zonke siqhubekile sancipha kuzo zombili izinhlaka zikahulumeni nezizimele. Mayelana nokufa kwabantu esikhathini esedlule samahora angama-24, isifundazwe sibike ngokufa okusha okukodwa okuhlobene nokhuvethe. Lokhu sekwenze kwaba ngabantu aba-14 704 isibalo sabantu abashona ngenxa yokhuvethe esifundazweni sethu selokhu kuqale lolu bhubhane.”
UHulumeni wesifundazwe uphinde waveza ukukhathazeka ngesibalo esikhulu sabahlali abangazange bagonyelwe ukhuvethe. Njengamanje, kunabantu abayizigidi ezi-2.9 abathole imijovo yokugoma esifundazweni lokhu kungamaphesenti angama-29 kuphela abantu.
Isimo sokulungela ukhetho oluzayo
Khonamanjalo, uNdunankulu uphawule nangesimo sesifundazwe sokulungela ukhetho olukhululekile, olunobulungiswa, nolunokuthula mhla lulu-1 kuLwezi. Njengoba imikhankaso yokhetho lomasipala iqhubeka, uZikalala unxuse amaqembu ezepolitiki ukuthi akhankase ngendlela efanele, aqinisekise ukuthula nobumbano emiphakathini.
Luthathe elinye iqxathu elepulazi lakwaDimba
Ngesonto eledlule, iDemocratic Alliance (DA) yagxekwa ngezingqwembe zokukhankasa eyazifaka ePhoenix ezithi “I-African National Congress (ANC) inibize ngababandlululi; iDA inibiza ngamaqhawe.” IDA izisusile lezi zikhangiso. Babalelwa kwa-36 abantu ababulawa ePhoenix ngesikhathi kunezinxushunxushu ezenzeka ngoNtulikazi, nokwasusa uthuthuva ngokobuhlanga kule ndawo.
UZikalala uphinde wanxusa amaqembu ezepolitiki nabavoti abafanelekile ukuthi balandele imigomo kaHulumeni ebekiwe yokubhekana nokhuvethe.
“Siqaphele izinto eziningi eziphazamisayo eziphathelene nemikhankaso yokhetho lwamaqembu ezepolitiki athile. Eminye yale mikhankaso ibe ngusomathuba kanti abanye bebefuna uqhekeko phakathi kwemiphakathi. Sifisa ukunxusa wonke amaqembu ezepolitiki ukuthi aziphathe kahle, azithobe futhi ashumayele ivangeli lobunye. Abantu abagwemi izindawo lapho ukuthelelana ngokhuvethe kunamathuba aphezulu ngisho nangalezi zikhathi zokhetho. ”